Akhriso: Sharciyada Sweden ka jira ee isbadalaya Bisha April Bilowgeeda Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenAkhriso: Sharciyada Sweden ka jira ee isbadalaya Bisha April Bilowgeeda
Akhriso: Sharciyada Sweden ka jira ee isbadalaya Bisha April Bilowgeeda
March 31, 2021 Wararka Sweden, Wararka Maanta Somaliska, Warka ugu akhriska badan 0
Laga bilaabo 1da Abriil, waxaa jira Shariyo Sweden iska beddelaya. Sharciyada Sweden iska badalaya ayaa kala ah
Laga bilaabo Abriil 1, dugsiyadu waxay albaabada u furi karaan ardayda da’doodu ka weyn tahay 16 sano, laakiin dugsi kasta wuxuu leeyahay suurtagalnimada waxbarasho fog haddii loo baahdo, sababo la xiriira faafitaanka cudurka ee iskuulka ama aagga uu iskuulku ku yaal, ama haddii lagama maarmaanka u ah yareynta saxmadda iskuulka ama gaadiidka dadweynaha. Go’aanka waxaa qaadan kara maamulayaasha iskuulka.
Xaddidaadda Corona ee Gudaha
Xilligan, 10 ka mid ah 21-ka degmo ee Iswidhan ayaa fulinaya tallaabooyin adag oo gudaha ah oo ku saabsan Coronavirus. Si kastaba ha noqotee, inbadan oo kamid ah hada waxaa loo qorsheeyay inay dhacayaan waqti uun bisha Abriil (gobolada Västerbotten, Jämtland, Västmanland, Sörmland iyo Västra Götaland), laakiin waa macquul in la kordhiyo talaabooyinkan ama in talaabooyin dheeri ah laga qaado gobolada kale. Sidoo kale waa suuragal in lala qabsado xeerarka qaranka kolba sida xaaladdu isu beddelayso.
Bilowga bisha Abriil, waxay bilaabmi doontaa in wax laga beddelo sharciyada socdaalka ee Danmark iyo Norway, maadaama safarka labadan dal loola dhaqmi doono sida dalalka kale ee EU / EEA, taas oo macnaheedu yahay inaan loo baahnayn sabab gaar ah ”safarka, inkasta oo socdaalayaashu wali u baahan yihiin inay soo bandhigaan tijaabooyinka ‘Covid-19’ markay yimaadaan.
Kuwa safarka ah ee ka imanaya Boqortooyada Ingiriiska, waxaa loo sii wadi doonaa in loola dhaqmo sida socdaalayaasha kale ee ka yimid wadamada ka baxsan Midowga Yurub.
Isbadal kale oo ay tahay in laga feejignaado ayaa ah, dadka u soo gudbaya Sweden wax barashada hada waxaa loola dhaqmi doonaa sida shaqaalaha xuduudaha ka gudba, taas oo macnaheedu yahay inay u baahan yihiin inay muujiyaan tijaabada Covid-19 wax ka yar hal usbuuc ka hor, oo aan ka yarayn 48 saacadood ka hor .
Xilliga caddeynta canshuurta
Waqtiga kama dambaysta ah ee lagu soo gudbinayo soo celinta canshuurta Sweden waa 3-da Maajo, laakiin kuwa ku soo gudbiyay xogtooda internetka ka hor 30-ka Maarso ee aan u baahnayn inay wax isbeddel ah ku sameeyaan diiwaanka canshuurta, Abriil 7-9 waa Marka Lacag celinta la heli doono.
Suurtagalnimada in la bixiyo shahaadooyinka waxbarashada laga bilaabo fasalka afaraad ee dugsiga hoose
Laga bilaabo Abriil 1, dugsiyadu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay galaan fasalada waxbarasho ee ka bilaabanaya fasalka afraad (badanaa waxaa la siiyaa carruurta laga bilaabo fasalka lixaad (12 ilaa 13 sano jir).